5 waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay in la ogaado marka la dooranayo qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Shuruudaha caafimaadka iyo caymiska caafimaadka ayaa si aad ah loogu wareeraa. Balse markaad haysato Medicaid iyo Medicare labaduba waxay ku darayaan wareer cusub oo kale oo buuxa. Marka laga hadlo UnitedHealthcare, balanqaadka ah inaan kuu fududayno waxyaabaha ayaa haga wax kasta oo aan samayno. Gudaha maqaalkan, waxaan rabnaa inaan kuugu fududeyno inaad fahamto qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee ku saabsan qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
1. Waa loola jeedaa “laba geesood” iyo “qorshaha u-qalma labada caymis” Context link
Laba geesood waa hab kale oo loo yiraahdo “laba” ama “labadaba.” Marka laga hadlayo qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah, laba geesood waxaa loola jeedaa in qorshayaashaan loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. “U-qalma labada caymis” waa erey qeexaya dadka xaqa u leh, ama u qalmo, si ay u helaan macaashka Medicaid iyo Medicare labaduba. Dadkaan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa “dadka u-qalma labada caymis.”
2. Qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ama qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah? Waa maxay fariga u dhexeeya?
Sinaba. Eber. Waxna. Ma jiro farqi u dhexeeya. Haddi aad isticmaasho qorshaha laba geesoodka ah, qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ama qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ama xataa DSNP marka la soo gaabiyo, erayadan oo dhan macnahoodu waa isku mid. Waxay qeexayaan nooca qorshaha caafimaadka ee si gaar ah loogu talagalay inuu daboolo baahiyaha dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba.
3. Qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ma ka dhigaa Medicaid iyo Medicare hal mid?
Qodobkan waxaa ku jahawareeray dad badan, balse jawaabtu waa maya. Qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah ma beddelo qorshahaaga Medicaid. Waxaad haysan doontaa qorshahaaga Medicaid, waxaadna weli heli doontaa dhammaan macaashyada Medicaid ee aad hadda hesho. Qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah waa nooc ka mid ah Medicare Advantage. Wuxuu beddeli doonaa qorshahaaga Medicare ee jira. Waxaa intaas dheer, waxaa ku jira caymiska daawada dhakhtarku qoro iyo macaashyo iyo sifooyin kale oo badan oo siyaado ah. Wixii faahfaahino dheeraad ah, eeg Macaashyo ka badan kuwa Original Medicare
4. Goormee ayaad isku diwaangelin kartaa qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah? Context link
Waxaa jira sharciyo xakameynaya goorta aad isku diiwaangelin karto qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah. Marka ugu horraysa ee aad u-qalanto Medicare, waxaad heli doontaa Muddada Diiwaangelinta Bilowga ah (IEP). IEP-gaagu waa muddada 7-bilood ee:
Bilaabato 3 bil kahor bisha aad buuxsato 65
Waxaa ku jira bisha aad soo buuxsato 65
Dhammaanayso 3 bil kadib bisha aad buuxsato 65
Haddii aad leedahay dhacdo nololeed oo aad ugu qalmi karto, waad isku diiwaangelin kartaa adigoo adeegsanaya Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah (SEP). Guuritaanka ama luminta caymiskaaga waa kaliya 2 tusaalooyinka dhacdooyinka nololeed ee loogu qalmi karo. Balse wakhtiga ay tahay inaad isdiiwaangeliso way ka duwanaan kartaa iyadoo ku xiran sababta SEP-gaaga.
Waxaa sidoo kale jira Muddada Diiwaangelinta Sannadlaha ah ee Medicare (AEP). AEP waxay bilaabataa Oktoobar 15 ilaa Diseembar 7 sanad kasta. Qof kasta oo u-qalma wuu isku diiwaangelin karaa ama iska beddeli karaa qorshahiisa Medicare inta lagu gudajiro AEP. Taasi waxaa ku jira haddii aad rabto inaad iska beddesho Original Medicare una wareegto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
Markaad isdiiwaangeliso, uma baahnid inaad cusboonaysiiso qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah. Ilaa iyo inta aad u-qalmato, qorshaha caafimaadkaaga ee laba geesoodka ah ayaa si toos ah loo cusboonaysiin doonaa sannad kasta. Balse waxaad u baahan tahay inaad dib u caddayso Medicaid sanad walba si aad ugu qalanto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
5. Halkee ayuu UnitedHealthcare Dual Complete® ku habboon yahay?
“Dual Complete” waa astaan shirkadeed oo loogu talagalay qorshayaasha caafimaadka ee ay bixiyaan UnitedHealthcare. UnitedHealthcare waxay u adeegaysay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee daryeelka caafimaadka in ka badan 40 sano. Maanta, UnitedHealthcare waxay u adeegtaa xubno badan oo labada caymis u-qalmo oo joogo gobollo badan marka loo eego shirkad kasta oo kale oo daryeelka caafimaadka.1
1Iyadoo ku salaysan saamiga suuqa qaranka laga bilaabo 2019
Miyaadan helin waxaad raadineyso?
UnitedHealthcare waxay leedahay liiska onlaynka ah oo bilaash ah oo ka kooban kumanaan ereyada caafimaadka ah iyo macnahooda. Waxaa la yiraahdaa Just Plain Clear waana qaamuuskii ugu weynaa ee noociisa ah.
TALO: Ku dar linkiga liiska aad ugu jeceshahay si aad si fudud ugu heli karto maktabadda wakhti kasta oo aad mustaqbalka u baahato.